Madasha Wada-tashiga Qaran oo ku baaqay in la dhiso Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe ka hor doorashada – STAR FM SOMALIA
Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa ugu baaqay Xukuumadda Soomaaliya inay dar dar geliso dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo muddo bilooyin hakad ku jira, kadib markii habsami u socodka shirkii ka socday Jowhar ay hareeyeen khilaafaad.
War murtiyeedka shalay ka soo baxay Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa looga dalbaday Xukuumadda in la xaqiijiyo dhismaha Maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, inta ka horeysa xilliga doorashada.
Madaxda Madasha ayaa shirkoodii ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga doodeen sida lagama maarmaan ay u tahay in la dhiso maamulka labada gobol, iyadoo qaar ka mid ah odayaasha reer Hiiraan ay diidan yihiin ka qeyb galka shirkaas.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya C/raxmaan Odawaa ayaa sheegay in dhowaan dib loo bilaabi doono shirka Jowhar, isla markaana la dhameystiri doono maamulka labada gobol ka hor inta aan la gaarin doorashada.
Dad badan ayaa is weydiinaya, mudada labada bilood ee ka harsan doorashada sida ay ku suurta geli karto dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo ay jiraan caqabado fara badan oo ku hor-gudban shirka maamul u sameynta labada gobol.
Sanad ayaa ka soo wareegatay heshiiskii lagu saxiixayay in labada gobol ay yeeshaan maamul, walina waxaa taagan is mari waa la xiriira in labada gobol loo dhiso maamul ka mid noqda maamulada federaalka ee dalka ka jira.